Enrollment & Transfer / Enrollment - Somali
Enrollment - Somali
Ku soo dhawoow Dugsiyada Dadweynaha ee Portland!
Tani waa sida loo qoro arday kaas oo ku cusub Dugsiyada Dadweynaha ee Portland.
Soo ururi macluumaadkan
Dhukumenti caddeyn u ah da’da (shahaado dhalasho, baasaboor ama dhukumenti lamid ah)
2 dhukumenti oo xaqiijin u ah cinwaanka. Tusaalayaasha waxa kamid ah heshiisyada amaahda guryaha, heshiiska kirada, biilasha adeegyada guriga (taas oo ku taariikhaysan 30 ka maalmood ee ugu dambeeya wakhtiga isqorista), caymiska ama bayaanka kaalmada dawladda.
⁃ Magaca dawladda, cinwaanka guriga iyo taariikhdu waa inay muuqdaan
⁃ haddii aanad bixin karayn laba caddeymood oo cinwaanka ah, la xidhiidh Xarunta Qorista iyo Gudbinta
⁃ Macluumaadka Shuruudaha Tallaalka ee heerka fasalka waxa laga heli karaa
websaytka Adeega Tallaalka Degmada ee Waxbarashada Multnomah
Macluumaadka Baadhitaanka Caafimaadka Ilkaha iyo Aragtida (Keliya da’da 7 sano jirka iyo wixii ka yar)
Macluumaadka xidhidhka xaaladda degdega ah
Macluumaadka xidhiidhka dugsigii hore (looma baahna bilawga Xanaanada)
Waxbarashada gaarka ah (IFSP, IEP) ama qorshaha adeegyada gaarka ah (504), haddii ay habboon tahay
Hannaanka diiwaangelinta onlaynka ah
Diiwaangelinta onlaynka waxa ay qori doontaa ardayga dugsiga loo qoondeeyey cinwaanka halka aad degan tahay. Haddii ardayga loo ansixiyey in loo beddelo dugsi kale, kala xidhiidh dugsiga beddelka ikhtiyaarada qorista. Haddii aad kala kulanto adaygyo farsamo diiwaangelinta onlaynka ah, iimayl kala xidhiidh Taageerada IT ga support@pps.net.
Waxa aad tagtaa barta:
Waxa aad riixdaa Ka Shaqaysii Akownka/Dib U Deji Erayga Sirta ah
Waxa aad riixda Abuur Akown Cusub
Akhri Bayaanka Qarsoodiga haddii aad ogoshahayna, riix Waan Aqbalay
Waxa aad gelisaa macluumaadka akownkaaga waxana aad riixdaa Ku Sii Soco Tallaabada 3
Waxa aad tixraacdaa iimaylka xaqiijinta ee aad heshay waxana aad raacdaa tallaabooyinka xiga
Marka aad gudbiso isdiiwaangelinta onlaynka ah, shaqaalaha dugsiga ayaa kaala soo xidhiidhi doona dhamaystirka qorista.
Hannaanka isdiiwaangelinta warqadda ah
Waxa aad dhamaystirtaa Foomka Diiwaangelinta Ardayga ee warqadda ah kuna celi xoghaynta dugsigaaga adiga oo raacinaya dhammaan dhukumentiyada taageerada ah.
Isdiiwaangalinta Xannaanada Caruurta
Haddii aad la shaqeyneyso Dugsiyada Dadweynaha Portland sidii ay u horumarin lahaayeen Waxbarashada Gaarka ah (IEP) ee Xannaanada Caruurta, sababtoo ah ilahaaga ayaa la siiyey addeegyada waxbarshada gaarka ee waxbarashada xilliga hore isaga oo haysta IFSP, markaasi ilamahaaga waxaa si toos loo qori doonaa iskuulka dariskaaga. Waxa aad ka hubin doontaa qeybta xogta gaarka lagu keydiyo iyada oo la soo degi nuqulada xogta lagaaga baahan yahay sidii aad u xaqiijin lahayd marka la gaaro dhammaadka xilliga xaggaaga ParentVUE. Haddii diiwaangalinta lagaaga oggolaaday barnaamijka labada luqadooda wax lagu barto ama iskuul aan ahayn Dugsiyada Dadweynaha Portland ee dariskaaga oo la diiwaangaliyey ardayga taasi oo ka turjumi doontaa isbedelka.
Arday Soo Noqonaya
Ku soo dhawoow mar labaad Dugsiyada Dadweynaha ee Portland!
Ardaygaaga waxa loo tixgeliyey arday soo noqonaya haddii ay hore u xaadireen dugsiyadayada, oo ay ku jiraan dugsiyada gaarka ah iyo barnaamijyada beddelka ah, ama ay heleen adeegyo loo soo mariyey PPS. Tani waa sida loo qoro arday kaas oo hore loo qoray Dugsiyada Dadweynaha ee Portland.
Liiska hubinta qorista
Foomka Diiwaangelinta Ardayga
2 dhukumenti oo caddeynta cinwaanka ah. Tusaalayaasha waxa ku jira heshiiska amaahda guryaha, heshiiska kirada, biilasha adeegyada guryaha (kuwaas oo ku taariikhaysan 30 kii maalmood ee ugu dambeeyey ee wakhtiga isqorista), caymiska ama bayaanka kaalmada dawlada.
⁃ Magaca waalidka, cinwaanka guriga iyo taariikhdu waa inay muuqdaan
⁃ Haddii aad bixin kari weydo laba cadaymood oo cinwaanka ah, la xidhiidh Xarunta Qorista iyo Gudbinta
Diiwaanada tallaalka ama Shahaadada Oregon ee Xaaladda Tallaalka
⁃ Waa loo baahan yahay haddii diiwaanada la cusboonaysiiyey
Foomka Shahaadada Baadhista Caafimaadka Ilkaha iyo Aragga (Keliya da’da 7 sano jirka ama kayar)
⁃ Waa loo baahan yahay haddii aan hore loo dhamaystirin
Macluumaadka xidhiidhka ee xaaladda degdegga ah
Macluumaadka xidhiidhka ee dugsigii hore (looma baahna bilawga Xanaanada)
Dhamaystir Foomka Diiwaangelinta Ardayga kuna celi xoghaynta dugsigaaga adiga oo raacinaya dhammaan dhukumentiyada taageerada ah.
Ardayga ee warqadda ah kuna celi xoghaynta dugsigaaga adiga oo raacinaya dhammaan dhukumentiyada taageerada ah.
Ma jiraa wakhti kama dambays ah oo lagu diiwaangeliyo ilmahayga dugsiga?
Waxa aanu ku dhiirrigelinaynaa qoysaska xanaanada ee cusub oo aanu leenahay fadlan qora ilmihiina ugu dambeyn Juun 1 sanad dugsiyeedka soo socda. Qaabkaas, shaqaalaha dugsigu waxa ay diyaar u noqon doonaan ardaygaaga waxana aanay wadi doonaan inay ku wargeliyaan xagaaga oo dhan. Ardayda kale ee galaysa PPS waa inay is diiwaangeliyaan sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah. Dugsiyada Dadweynaha ee Portland ma laha wakhti kama dambays ah oo la is qoro.
Waxa aan doonayaa inaan qoro ilmahayga inta lagu gudo jiro xagaaga, laakiin dugsigu waa uu xidhan yahay. Waa maxay ikhtiyaaradaydu?
Isqoritaan Onlayn ah ayaa la heli karaa sanadka oo dhan, waxana la gelin doonaa diiwaangelinta ardaygaaga kuyuu si ay u eegaan shaqaalaha dugsigu marka ay ka soo noqdaan fasaxa xagaaga, oo ah dhawr todobaad kahor inta aanu dugsigu bilaabmin. Shaqaalaha Qoritaanka & Gudbinta ayaa la heli karaa si ay gacan uga geystaan diiwaangelinta dhamaan mudada xagaaga, oo ay ku jirto aqbalitaanka waraaqaha diiwaangelinta. Fadlan la xidhiidh iimaylka enrollment-office@pps.net si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Miyey tahay inaan diiwaangeliyo ilmahayga sanad walba?
Maya, keliya waa inaad diiwaangeliso ilmahaaga halmar. Intaas kadib, illaa iyo inta ardaygaagu uu firfircoon yahay, waxa ay si otomaatig ah ugu wareegi doonaa fasalka xiga adiga oo aan u baahnayn inaad wax samayso. Sanad walba, waxyar uun kahor inta aan dugsigu bilaabmin, waxa laguu soo diri doonaa Foomka Xaqiijinta si loo xaqiijiyo macluumaadka ardaygaaga.
Miyey tahay inaan ka codsado diiwaanada ardaygayga dugsigii hore?
Illaa iyo inta dugsigii hore ee ardaygaagu uu ahaa Maraykanka, Dugsiyada Dadweynaha ee Portland waxay kuu gudbin doontaa codsiga diiwaanada adiga. Haddii ardaygaagu uu ka imanayo meel ka baxsan wadanka, waxa aad u baahan doontaa inaad adiga laftaadu diiwaanada ka keento ama ka codsato dugsigii hore.
Imisa jir ayaa ay tahay ilmahaygu in uu noqdo si loo qoro Xanaanada?
Si uu u bilaabo Xanaanada ilmahaagu waa in uu noqdo 5 sano jir marka la gaadho ama kahor Sateembar 1deeda. Haddii ardaygaagu yahay 6 oo horena aanu u xaadirin xanaano, kala shaqee shaqaalaha dugsiga inay go’aamiyaan inay tahay inay qoraan xanaanada ama fasalka 1aad.
Ma qori karaa ilmahayga KG ga haddii ay noqdaan 5 jir kadib Sateembar 1deeda?
Haddii ilmahaagu uu noqdo 5 jir inta u dhaxaysa Sateembar 2deeda iyo Oktoobar 1deeda waxa aad codsan kartaa Gelitaanka Da’da Hore ee Xanaanada taariikhaha ka muuqda halkan. Haddii ilmahaagu uu noqdo 5 jir kadib Oktoobar 1deeda, waxa ay noqonaysaa inaad sugto illaa sanadka xiga si aad u qorto. Ardayda Gelitaanka Da’da Hore ee La Ansixiyey awood u yeelan maayaan in onlayn ahaan lagu qoro shuruudda da’da ugu yare e nidaamka awgii.
Ilmahaygu ma ka boodi karaa Xanaanada?
Xanaanadu maaha waajib Oregon. Haddii aad doorato inaad ilmahaaga ka dayso dugsiga illaa ay gaadhayaan lix jir, waxa la qori karaa si toos ah fasalka 1aad. Haddii aad dareento shan sano jirkaagu in uu horumarsan yahay oo uu ka boodi karo Xanaanada oo la qori karo fasalka 1aad, weli waxaad u baahan doontaa inaad qorto Xanaanada kadibna aad la shaqayso masuuliyiinka dugsigaaga iyo waaxda Dadka Hibada Leh. Hannaanka waxa loo yaqaan Dedejinta Fasalka oo Dhan.
Cinwaanka iyo Deganaanshaha
Dhawaan ayaan soo guuray mana bixin karo 2 qaybood oo caddeyn ah oo cinwaanka ah. Weli ma qori karaa ilmahayga dugsiga xaafadaha aan deganahay ee cusub?
Haddii aanad bixin Karin cadayn deganaanshiyo guuritaan dhawaan ah ama isbeddel ku yimaadda xaaladda qoyska awgeed, Caddeyn Degaanshiyo oo ku meel gaadh ah ayaa la soo saari karaa taas oo u ogolaanaysa ardayga in uu xaadiro dugsiga 10 maalin dugsiyeed inta aad helayso dhukumentiyada lagama maarmaanka ah. Haddii aad bixin kari weydo caddeyn maadaama oo aanad imika ahaan lahayn guri cayiman, joogto ah ama habboon, dugsiga ama Xarunta Qorista & Gudbinta ayaa kuu gudbin doonta wakiilka McKinney-Vento.
Waxa aanu si ku meel gaadh ah u deganahay guri illaa aanu dhamaystiri karno iibsiga ama dhismaha gurigayaga cusub. Ma qori karaa ilmahayga dugsiga xaafadaha ee loo qoondeeyey cinwaanka guriga ee cusub?
Haddii aad bixin karto cadayn in aad degi doonto guriga cusub 45 maalmood oo kaalendar gudahood oo ka bilaabmaya isqorista, waxa aad qori kartaa dugsiga cinwaankaas. Haddii kale waxa aad u baahan doontaa inaad qorto dugisiga loo qoondeeyey cinwaankaaga hadda illaa aad bixin karto dhukumentiyada lagama maarmaanka ah.
Waxa aanu deganahay aag muhiim ah oo laba geesood ah. Taas macneheedu maxay tahay?
Ardayda ku nool aagga xaadiritaanka Dugsiga Sare ee Jefferson waxa ay leeyihiin ikhtiyaar gaar ah oo u dhexeeya Kuliyadda Dhexe ee Jefferson ee Waxbarashooyinka Horumarsan iyo dugsi sare oo dhamaystiran, oo ku salaysan cinwaanka gurigooga. Maadaama oo ay tahay inaad doorato dugsigaaga isqorista kahor, isqorista onlaynka ahi uma furna ardayda cusub ee ku nool aag muhiim ah oo laba geesood ah.
Iyada oo ay ku xidhan tahay halka aad degan tahay, marka uu ardaygaagu diyaar u yahay in uu bilaabo dugsiga sare waxa aad ikhtiyaar u yeelan kartaa inaad kala doorato Jefferson iyo Grant, Jefferson iyo Madison, ama Jefferson iyo Roosevelt. Marka aad ogaysiiso Xarunta Qoritaanka & Gudbinta ikhtiyaarkaaga, ardayda badankoodu waxa ay is qori karaan dugsiga cusub. Ardayda ku jira fasallada kow iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad kuwaas oo doorta Jefferson waxa ay u baahan doonaan inay kala shaqeeyaan maamulka Jefferson go’aaminta inay ku sugan yihiin dhabbaha inay la qallin jabiyaan barnaamijka kuliyadda dhexe kahor isqorista.
Qoyskaygu waxa ay ku nool yihiin meel ka baxsan gobolka. Waxa aan jeclaan lahaa in aan qoro ilmahayga PPS maadaama aan ka shaqeeyo Portland qaaditaankuna aanu mushkilad ahayn. Tani suuragal ma tahay?
Nasiib xumo maalgelinta dugsigu kama gudubto xadadka gobolka. Si arday ka socda meel ka baxsan gobolku isku qoro dugsi dadweyne oo Oregon ah, waxa ay noqonaysaa inay bixiyaan fiiga waxbarashada. Fiiga waxbarashadu waxa uu la mid yahay xaddiga maalgelinta gobolka ee degmadu u hesho ardayga, sidaas oo ay tahayna waa uu kala duwan yahay sanad illaa sanad. Fadlan la xidhiidh xarunta Qorista & Gudbinta haddii aad danaynayso inaad ogaato wax dheeraad ah oo ku saabsan heshiisyada fiiga waxbarashada.
Gudbinaha iyo Duruufaha Gaarka ah
Ma ku hayn karaa ilmahayga isla fasalka uu ku jiro sanadka xiga?
Diiwaangelinta bilawga ah waxa ay ku salaysan tahay taariikhda fasalka ee ardayga (tusaale, haddii ay fasalka saddexaad ahaayeen sanadkii hore, waxa ay isqori doonaan fasalka afraad sanadkan). Marka ardayga la diiwaangeliyo waxa aad kala shaqayn kartaa masuuliyiinta iyo shaqaalaha dugsiga inay go’aamiyaan in soo celinta fasalka (oo loo yaqaan hayn) ay danta ugu wanaagsan ee ardaygu ku jirto.
Waxa aan u gudbiyey codsi beddel dugsi PPS oo kale. Ma ku hayn karaa ilmahayga guriga illaa go’aan laga gaadhayo codsiga gudbinta?
Go’aanada beddelku badanaaba waxa ay qaataan inta u dhaxaysa hal illaa saddex toddobaad si loo socodsiiyo. Ardaydu waxa ay wanaagsanaadaan marka ay u xaadiraan dugsi si joogto ah, waana inay ku sugnaadaan dugsigooga hadda illaa go’aan laga gaadhayo codsiga beddelka.
Haddii aad ku cusub tahay PPS waxa aad dhamaystiri kartaa isdiiwaangelin onlayn ah inta aad sugayso natiijooyinka beddelka. Haddii beddelkaaga la ansixiyo, xoghayeyaasha dugsiga xaafadahaaga iyo beddelka waxa ay ka wada shaqayn doonaan inay u gudbiyaan diiwaanadaada dugsiga cusub. Haddii beddelkaaga la diido, waxa aad xaq u leedahay inaad is qorto dugsiga xaafadahaaga.
Ardaygaygu waa laba luuqadle. Sideen u qori karaa barnaamijka isdhexgelinta labada luuqadood?
Heerka Xanaanada, barnaamijyada isdhexgalinta Labada Luuqadood waxa lagu qoraa bakhtiyaa nasiib la qabto gu’ga kahor inta aan dugsigu bilaabmin. Fasalada sare, ama ama kadib marka bakhtiyaa nasiibku xidhmo, waxa aad codsan kartaa gelitaanka barnaamijka isdhexgelinta labada luuqadood adiga oo u maraya hannaanka codsiga. Aqbalitaanku waxa uu ku salaysan yahay booska barnaamijka ku hadlayaasha dhaladka ah ee luuqadaha la isdhex galiyeyna waxa ay leeyihiin mudnaanta qoritaanka.
Ma ihi waalidka ardayga aan diiwaangelinayo. Ma qori karaa ardayga?
keliya waalid ama masuul sharci ah oo wata cadeyn sax ah ayaa si otomaatig ah u qori kara arday dugsiga. Haddii aad ka caawinayso waalid ama masuul diiwaangelinta, waxa ay u baahan yihiin inay joogaan oo ay saxeexaan foomamka diiwaangelinta si ardayga loo qoro. Haddii waalidka ama masuulku aanu si joogto ah xaadir ugu ahayn nolosha ilmaha adiguna aad tahay qofka weyn ee ka warhaya ilmaha, fadlan la xidhiidh dugsigaaga ama xarunta Qorista & Gudbinta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hannaanka heshiiska ka warhaynta.
Waxa aan ahay arday da’diisu ka yar tahay 18 gaarna waan u noolahay. Sidee baa aan isku qori karaa dugsiga?
Fadlan la xidhiidh dugsiga loo qoondeeyey cinwaanka hadda aad degan tahay, oo sharrax xaaladdaada. Waxa ay kaa caawin doonaan isqorista iyo la shaqaynta kooxda McKinney-Vento si aad u hesho taageerada dheeraadka ah ee ay heli karaan dhallinyarta aanay cidi wehelin. Waxa aad sidoo kale toos ugala xidhiidhi kartaa kooxda McKinney-Vento 503-916-5770.
Su’aalaha La Isweydiiyo Badanaa ee Kale
Ma qori karaa ilmahayga haddii ay ku dhamaysteen fasalka 12 aad wadan kale?
Nasiib xumo, maya. Siyaasadda Guddiga Dugsiga waxa ay dhigaysaa: “[Ardayga] u dhexeeya da’aha 7 iyo 18 sano ee aan dhamaystirin fasalka 12 aad in looga baahan yahay in uu si joogto ah u xaadiro dugsi dadweyne wakhti dhamaystiran.” Haddii uu qof dhamaystiro fasalka 12 aad ama barnaamij la mid ah, waa inaanay is qorin fasalo joogto ah. Waxa la qori karaa adeegyo soconaya sida waxbarashada gaarka ah, balse lagama qori karo barnaamij joogto ah dugsi xaafadaha ah.
PPS ma kafaala-qaadaa fiisooyinka ardayda caalamiga ah? Hadday sidaa tahay, yaan la xidhiidhaa?
PPS ma kafaala-qaado Fiisayaasha ardayda caalamiga ah. Haddii arday degan meel ka baxsan wadanka uu jeclaan lahaa dugsi si uu u helo khibrad waxbarasho debedda ah, qoysku waxa ay u baahan doonaan inay la xidhiidhaan mid kamid ah barnaamijyada waxbarashada debedda ee wadankooga kuwaas oo loo ansixiyey inay ardayda galiyaan PPS. Waxa aad tagtaa www.pps.net/Page/1029 si aad u hesho liiska Barnaamijka Waxbarashada Debedda ah ee la ansixiyey.
Waxa aan doonayaa in ilmahaygu guriga wax ku barto. Waa maxay hannaanku?
Su’aalaha ku saabsan waxbarashada masaafadda ah waa in lagu hagaajiyaa dugsiga wakhtiga isqorista. Waalidiinta doonaya waxbarashada guriga waa inay ku diiwaangeliyaan ardaygooga MESD (Degmada Adeega Waxbarashada ee Mulnomah). Ardayda u qalantaa waxa ay heli karaan adeegyo waxbarasho gaar ah xataa haddii guriga wax lagu barayo. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, waxa aad tagtaa www.multnomahesd.org/homeschool.
Waxa aan doonayaa in ilmahagu u tago PPS hal xiisad halka guriga uu wax ku baranayo wakhtiga intiisa kale. Tani suuragal ma tahay?
Isqorista qayb kamid ah wakhtiga ah waa la ogol yahay dugsiyada xaafadaha PPS illaa iyo inta uu maamulaha dugsigu uu ogolaanayo codsiga. Codsiyada waa la diidi karaa helitaanka boos, khalkhal ku yimaadda jadwallada iyo hawl-maalmeedyada dugsiga, iyo khayraad si habboon loogu tageero ardayda qayb kamid ah wakhtiga soo xaadirta awgood.
Ardayda qayb kamid ah wakhtiga soo xaadiraysa ee isqorta dugsiyada hela maalgalinta gobolka waa inay bixiyaan fiiga waxbarashada ee xiisadaha PPS.
Fadlan la xidhiidh xarunta Qorista & Gudbinta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heshiisyada fiiga waxbarashada.
Isdiiwaangelinta Onlaynka ah
Side baa aan u qoraa arday meel aan ahayn dugsiga xaafadahayaga?
PPS waxa ay siisaa hannaan codsi gudbin ardayda doonaysa inay xaadiraan dugsi ka baxsan xaafadahooga. PPS sidoo kale waxa ay bakhtiyaa nasiib u qabataa Febraayo/Maarso kasta sanad dugsiyeedka soo socda dugsiyada/barnaamijyada marinka loogu helo bakhtiyaa nasiibka. Macluumaad dheeraad ah waxa aad ka heli kartaa bogga Bakhtiyaa Nasiibka iyo Beddelada. Haddii aad haysato beddel la ansixiyey, waxa aad isku qori kartaa onlayn ahaan dugsiga xaafadahaaga, diiwaangelintana waxa si otomaatig ah loogu wareejin doonaa dugsiga beddelka.
Marin ma uga heli karaa nidaamka Diiwaangelinta Onlaynka ah taleefankayga casriga ah ama taabletkayga?
Isdiiwaangelinta Onlaynka ah imika ahaan waxa sida ugu wanaagsan marin looga heli karaa koombuyuutar dheskitob/laabtob ah.
Ma bilaabi karaa Diiwaangelintayda Onlaynka ah imika hadhawna ma dhamayn karaa?
Codsiyada waa la keydin karaa dibna waa loo furi karaa wakhti dambe. Waxa aad kasii bilaabi kartaa meeshii aad kaga tagtay adiga oo ku gelaya isla magacii adeegsadaha iyo eraygii sirta ahaa.
Marka codsigayga onlaynka ah aan gudbiyo ma ku noqon karaa oo isbeddelo ma ku samayn karaa?
Maya. Si aad isbeddelo ugu samayso codsi aad gudbisay, waxa ay noqonaysaa inaad ogaysiiso dugsiga. Shaqaalaha xafiiska ayaa kadib isbeddlo kuu sameyn kara adiga. Marka diiwaangelintaada ama xaqiijintaada la aqbalo, markaa waad geli kartaa markale waanad ka noqon kartaa gudbinta si aad ugu samayso isbeddelo dheeraad ah sanadka oo dhan.
Booqo: Enrollment & Transfer Center at 501 N. Dixon St, Suite 140
Baadhitaanka Aragga & Ilkaha